पुग्याे अब लकडाउन हटाअाैँ । – भुुसाल – Pahilo Update
पुग्याे अब लकडाउन हटाअाैँ । – भुुसाल
By Desk	 On Sep 8, 2020
अागामी दिनमा अर्घाखाँची जिल्लामा लकडाउनकाे माेडालिटी कस्ताे हुने ? भन्ने सन्दर्भमा भदाै २३ गते सन्धिखर्कमा अायाेजित डिसिसिएमसीकाे वैठकमा साझा पार्टीकाे तर्फबाट हरिप्रसाद भुसालले राख्नुभएकाे विचार जस्ताकाे तस्तै :
१, लकडाउन नै नगराैँ । भेला, सभार समाराेह, गाेष्ठी, अन्तरक्रियामा राेक लगाअाैँ । चाहे भेटघाट हाेस् चाहे पिकनिक हाेस् दुई वा दुईभन्दा बढि मान्छे भेला हुने गफ गर्ने काम पुर्ण रुपमा राेक लगाअाैँ । तर जनता अातंकित हुनेगरि लकडाउन निरन्तर नगराैँ ।
२, मास्क नितिमा मात्र हैन, व्यवहारमै अनिवार्य गराैँ । यति ठुलाे उपस्थितिमा भईरहेकाे वैठकमा हाम्ले माक्स लाउन अावश्यक ठानिराछैनाैँ भनेपछि एक्लै बाटाेमा हिडिरहेकाे मान्छेलाइ कडाई गर्नुकाे तुक छैन । त्यसैले फेरि पनि भन्छु : मास्क नितिमा मात्र हैन, व्यवहारमै अनिवार्य गराैँ ।
३, गाडी राेक्ने कि मान्छे ? गाडीमा हैन मान्छेमा ध्यान लगाअाैँ । एम्वुलेन्स राता प्लेटवाला गाडिले धमाधम मान्छे अाेसारिराछन । यसतर्फ ध्यान दिअाैँ ।
४, बजार समय ताेकेर हैन, भिड नलाग्नेगरी व्यापार व्यवसाय गर्न प्राेत्साहित गराैँ । गाउँबाट गाडी नअाएपछि स्वाभाविक रुपमा पसलहरुमा भिड कम नै हुन्छ, यसर्थ पसल खाेल्नासाथ जाेखिम हुन्छ भन्नेमा म छैन । पसलमा अाउने ग्राहकलाइ सेनिटाईजर लगाईदिने, माक्स नलगाइ अाएकाहरुलाइ माक्स लगाईदिने, ग्राहक गईसकेपछि उ बसेकाे स्थान सेनिटाईज गर्ने अनि दुरी कायम गरि सावधानी का साथ व्यवसाय संचालन गर्न दिने कि ?
५, हाेइन भने, पिसिअार पाेजेटिभ अाएका मान्छेलाई १४ दिनपछि परिक्षण विना नै निकाे भएकाे मानिनेरैछ । भनेपछि पिसिअार परिक्षण किन र के का लागि । १४ दिनपछि सार्ने संभावना हुन्न भन्ने मनगडन्ते मान्यताका अाधारमा विना परिक्षण १४ दिनपछि जथाभावी हिड्न छुट दिदा झन भयाभह हुने हाे कि ? लकडाउन निरन्तर गरिरहने,तर परिक्षण भरपर्दाे ढंगले नगर्नु कति जायज हाेला ?
लकडाउनकाकाे माेडािलटी पछि, भाेकाहरुका कुरा, लकडाउनका कारण भाेकभाेकै बसेकाहरुकाे विषयमा केही साेच्ने कि ? खान नपाएकै कारण मर्नुपरेकाे खवर सुन्न नपराेस् । यतातर्फ पनि ध्यान दिने कि ? यस सम्वन्धमा विशेष छलफलकाे लागि ध्यानाकर्षण गराउदछु ।
सन्धिखर्क नगरपालिकाले गाइभैसीलाई सुत्केरी भत्ता दिने
अर्घाखाँचीका कोराना संक्रमित कुँवरको बाँकेमा मृत्यु
नेकपा अर्घाखाँचीको बैठक, प्रतिगमनका विरुद्ध कठोर संघर्ष…
बिद्या बिनोद माध्यमिक बिधालय पाणिनी ७ अड्गुरीको ६८ औ…
घिमिरेले भने : राजनीतिमा ढाट्नु हुदैन
राष्टिय जनमोर्चाले आज ६ वटै स्थानीय तहमा प्रदर्शन गर्ने